Wararka - Ma ogtahay sharciyada qalliinka ee la raacayo qalliinka balastarka PCBA?
Kuu idin siinayaa aqoon cusub oo PCBA ah! Kaalay oo daawo!
PCBA waa howsha wax soo saarka ee guddiga maran ee PCB iyadoo loo sii marinayo SMT ka dibna dib loo dhex geliyo gelinta, taas oo ku lug leh qulqulo badan oo qulqulatooyin isku dhafan iyo qaybo xasaasi ah. Haddii hawlgalku aan la jaan qaadi karin, wuxuu u horseedi doonaa cilado xagga nidaamka ah ama dhaawac qaybta ah, wuxuu saameyn ku yeelan doonaa tayada badeecada iyo wuxuu kordhiyaa qiimaha hawsha. Sidaa darteed, howsha qashin-qubka ee PCBA, waxaan u baahannahay inaan u hoggaansano xeerarka ku habboon ee hawlgalka oo aan si adag ugu shaqeyno si waafaqsan shuruudaha. Waxyaabaha soo socdaa waa hordhac.
Xeerarka howlgalka ee nidaamka kicinta PCBA:
1. Waa inaan cunno ama cabitaan laga helin goobta shaqada ee PCBA. Sigaar cabiddu waa mamnuuc. Ma jiro wax khasaare ah oo ku saabsan shaqada la qabanayo. Qalabka shaqada waa inuu ahaadaa mid nadiif ah oo nadiif ah.
2. Marka lagu gudajiro nidaamka PCBA chip, dusha sare ee lagu dhejinayo laguma qaadi karo gacmo qaawan ama faraha, maxaa yeelay dufannada lagu keydiyo gacmaha waxay yareyn doontaa weldability-ga waxayna si fudud u horseedi doontaa cilladaha alxanka.
3. Hoos u dhig talaabooyinka hawlgalka ee PCBA iyo qaybaha qaybaha ugu yar, si looga hortago qatarta. Meelaha kulannada ah ee galoofyada ay tahay in loo isticmaalo, galoofyada wasakhaysan waxay sababi karaan wasakheyn, sidaa darteed badalida joogtada ah ee galoofyada waa lagama maarmaan.
4. Ha isticmaalin dufanka ilaaliya maqaarka ama saabuunta lagu nadiifiyo ee ay ku jiraan maadada silikoonku, taas oo sababi karta dhibaatooyin xagga iibka iyo isku dhejinta maqaarka isku midka ah. Senti gaar ah oo loo diyaariyay oogada PCBA alxanka ayaa la heli karaa.
5. Qaybaha xasaasiga ah ee EOS / ESD iyo PCBA waa in lagu aqoonsadaa calaamadaha ku habboon EOS / ESD si looga fogaado jahwareerka qaybaha kale. Intaa waxaa sii dheer, si looga hor tago ESD iyo EOS inay qatar geliyaan qaybaha xasaasiga ah, dhammaan hawlgallada, isu imaatinka iyo tijaabooyinka waa in lagu dhammaystiraa goobta shaqada ee xakamayn doonta korantada taagan.
6. Hubi EOS / ESD worktable si joogto ah si aad u hubiso inay si fiican u shaqeynayaan (anti-static). Dhammaan noocyada halista ah ee qaybaha EOS / ESD waxaa sababi kara habka dhulka loo soo dejiyo ee aan saxda ahayn ama oksaydhka qaybta isku xidhka dhulka. Sidaa darteed, ilaalin gaar ah waa in la siiyaa isku darka "siligga seddexaad" ee marinka dhulka.
7. Waa mabnuuc in la xirxiro PCBA, oo sababi doonta dhaawac jir ahaaneed. Xirmooyin qaas ah waa in lagu bixiyaa wajiga shaqada ee lagu dhejiyaa nooca.
Si loo hubiyo tayada ugu dambeysa ee badeecooyinka, yareynta burburka qaybaha iyo yareynta qiimaha, waxaa lagama maarmaan ah in si adag loogu hoggaansamo shuruucda hawlgalka oo si habsami leh loogu shaqeeyo howsha chiBA ee PCBA.
Tifatiraha ayaa maanta jooga. Ma heshay?